I-HIV Nokuncancisa | La Leche League SA
Ukosuleleka yi-Human immunodeficiency virus (I-HIV) sisifo esinganyangekiyo, njengeswekile nepresha.
Kubaluleke kakhulu ukuba abantu abaphila ne-HIV bathathe amayeza abo azi-antiretroviral (ii-ARV) qho ngosuku.
Uzithathe ngendlela echanileyo ii-ARV.
Uchazele ugqirha okanye unesi wakho ukuba kunzima kuwe ukuba uzithathe.
Uye qho ekliniki ngawo ONKE amaxesha omele uye ngawo ngaphambi kokuba ubeleke.
Kumane kuvavanywa igazi ukuze kuhlolwe ukuba ii-ARV zakho ziyenza ingabonakali intsholongwane egazini lakho (<50c/ml).
Le nto ikhusela usana lwakho ukuba lungayifumani i-HIV. Usana lwakho nalo luza kufumana ii-ARV emva kokuba luzelwe ukunqanda i-HIV.
Iintsana ezingaphezu kwe-99% ezizalwe ngoomama abane-HIV ababinayo i-HIV.
XA USANA LUZELWE
Lugcine usana lwakho luthe ngca kuwe ulusu eluswini kangangexesha elide kangangoko kunokwenzeka. Ukuthana ngca ulusu eluswini kunceda ekuncanciseni ibe kunqanda into yokuba usana luhle kubunzima bomzimba luze lube ne-jaundiced okanye iyelo.
UKUNCANCISA NGOXA UNE-HIV
Ukuzincancisa ibele lodwa kukhusela iintsana ekubeni zingosulelwa nge-HIV ibe kunika usana lwakho elona thuba lihle lokuba libe sempilweni entle.
Ukuluncancisa ibele lodwa kwiinyanga eziyi-6 zokuqala kuthetha ukuba usana alufumani enye into yokutya okanye yokusela ngaphandle kobisi lwebele. Ezinye izinto – amanzi, iti, ubisi lwebhotile, ukutya – kunyusa umngcipheko wokufumana i-HIV nezinye izigulo.
Nangona kunjalo, ukulipha ubisi lwebhotile loo nto ayisosizathu sokuyeka ukulipha ubisi lwebele usana ukuba uzithatha qho ngosuku ii-ARV zakho ibe intsholongwane ingabonakali egazini.
Kuncetyiswa ukuba uluncancise ibele kangangeminyaka eyi-2 nangaphezulu.
Nokuba ulincancisa kangangexesha elifutshane, loo nto ingcono kunokuba ungaze uqale kwaphela ukulincancisa ibele.
NDITHINI XA USANA LWAM LUNGEKHO KUM?
Ukuba kunokwenzeka ugule okanye kufuneke uye esibhedlele, cela ukuba ulugcine usana. Okanye, ulikhanele ubisi lwakho ngoxa lungekho kuwe ukuze luqhubeke lunalo nokuze amabele angabibuhlungu ngenxa yokugcwala lubisi. Mxelele ugirha okanye unesi wakho ukuba uyancancisa.
KUTHWENI XA USANA NALO LUNE-HIV
Iintsana ezingaphantsi kwe-1% ezizalwe ngoomama abane-HIV ziza kuyifumana i-HIV. Ukuba usana lwakho luvavanywe lwaza lwafunyaniswa lune-HIV, ASIKHO isizathu sokuba ungaluncancisi ibele. Ukuluncancisa ibele kangangeminyaka eyi-2 nangaphezulu usana olune-HIV loo nto ingcono kwimpilo, ekondlekeni nasekuphileni kwalo. Ibalulekile into yokuba wena nosana lwakho nizithathe ii-ARV qho ngosuku.
UKULUYEKISA IBELE XA UNE-HIV
Ukuba ugqiba ukuyeka ukuluncancisa ibele, liyekise kancinci kancinci kwiiveki eziliqela. Ukuvela uluyekise ibele kunokwenyusa umngcipheko wokuba usana lwakho losuleleke.
UKUBA NDIKHETHA UKUNGALUNCANCISI IBELE?
Ukuba une-HIV ibe ukhethe ukungancancisi ibele, qinisekisa ukuba uyaziqonda ezi zinto kwaye ufumane inkcazelo ngazo:
Iingozi zokungancancisi ibele.
Indlela yokulungisa neyokugcina ubisi lwebhotile ukuze unciphise iingozi.
Kufuneka lubengakanani ibe uluphe kangaphi usana ubisi lwebhotile.
Iindleko zobisi lwebhotile.